Madaxweyne Farmaajo oo la kulmay Wasiirka Amniga iyo Agaasimaha NISA - Jowhar somali news leader
Wasiirka Amniga C/llaahi Maxamed Nuur iyo Agaasimaha KMG ee NISA Bashiir Goobe ayaa Madaxtooyada kula kulmay Madaxweyne Farmaajo, iyadoo uu wehliyo Madaxweynaha Koofur Galbeed C/casiis Lafta Gareen oo labadii cisho ee la soo dhaafay waday dadaalada xalinta khilaafka Farmaajo iyo Rooble.
Kulankan ayaa ah kii u horreeyay ee fool ka fool ah oo Madaxweyne Farmaajo iyo Wasiirka Amniga C/llaahi Maxamed Nuur ay yeeshaan, tan iyo markii uu Farmaajo si adag u diiday magacaabistii Wasiir C/llaahi.
Kulanka ayaa diirada lagu saaray sidii xal loogu heli lahaa khilaafka ka dhashay xil ka qaadistii Fahad Yaasiin iyo magacaabista Bashiir Goobe iyo sidoo kale Wasiirka Amniga Gudaha Cabdulaahi Maxamed Nuur.
Waxana uu kulankan imanaya kadib kulan ay xalay ku yeesheen madaxtooyada Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Rooble.
Kulankan ka dhacay Villa Soomaaliya ayaa daba socda kulan xalay Madaxtooyada ku yeesheen Madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo iyo Ra’isul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble, kulamadan ayaana xal loogu raadinayaa khilaafka u dhaxeeya Farmaajo iyo Rooble.
Maamulka Jubbaland oo soo gabagabeeyay doorashada Senatarada Aqalka Sare